Markaan akhrino Kitaabka Quduuska ah, waxaan ku dhibtooneynaa inaan fahamno wax walba oo Ciise yiri. Hal bayaan oo soo noqnoqda iyo marar badan ayaa laga akhrin karaa Injiilka Matayos: “Laakiin kuwa badan oo hore ayaa noqon doona kuwa u dambeeya, kuwa uguna dambana waa kuwa ugu horreeya” (Mt 19,30:XNUMX LUT).
Munaasabad kale, Ciise wuxuu dhagaystayaashiisa ku yidhi: "Waxaa jiri doonta oohin iyo ilko jirriqsi goortaad aragtaan Ibraahim, Isxaaq, iyo Yacquub iyo nebiyada oo dhan oo boqortooyadii Ilaah ku jira, laakiin iska bixi! Oo waxay ka iman doonaan bari iyo xagga galbeed, xagga woqooyi iyo xagga koonfureed, oo waxay u fadhiisan doonaan miiska boqortooyada Ilaah. Oo bal eeg, iyagu waa kuwa ugu dambeeya, marka horena, way ugu dambayn doonaan ”(Lk 13, 28-30 SLT).
Maryan, oo ahayd hooyadii Ciise, oo Ruuxa Quduuska ahu ku waxyooday, ayaa ku tidhi inaadeerkeedii Elisabed, “Xoog xoog badan buu isku muujiyay; Wuxuu ku kala firdhiyey dabaylaha oo dhan, Kuwaasoo ay cibaado leeyihiin oo kibir leh. Isagu wuu tirtiraa kuwa xoogga badan, Oo kuwa hooseeyana wuu sarraysiiyaa (Lk 1,51-52 NGÜ). Waxaa laga yaabaa inay halkaas tilmaan ka tahay in kibirku ku jiro liiska dembiyada iyo in Ilaah yahay karaahiyo (Maahmaahyadii 6,16: 19-XNUMX).
Qarnigii ugu horreeyay ee Kaniisadda, rasuul Bawlos wuxuu xaqiijiyey amarkan dib u soo celinta. Marka laga hadlayo arrimaha bulshada, siyaasada iyo diinta, Bawlos wuxuu ka mid ahaa “kuwii ugu horreeyay”. Wuxuu ahaa muwaadin Roomaan ah oo leh mudnaan aad u wanaagsan. Maalintii siddeedaad waxaa lay guday aniga oo ah reer binu Israa'iil, oo waxaan ahay qabiilka Benyaamiin, oo waxaan ahay Cibraani ka mid Cibraaniyada ka mid ah, oo kii Farrisi ahaa sida sharciga waafaqsan (Filibos 3,5 LUT).
Bawlos waxaa loogu yeedhay inuu u adeego Masiixa waqti ay rasuullada kale hore u ahaayeen wacdiyayaal khibrad leh. Wuxuu u qorayaa Korintos wuxuuna soo xiganayaa nebi Ishacyaah: "Waxaan rabaa inaan baabi'iyo xigmadda kuwa xigmadda leh, oo waan diidanahay garashada kuwa xigmadda leh ... Laakiin waa nacasnimada dunida hortiis, Ilaah wuxuu doortay inuu ceeb ka dhigo kuwa xigmadda leh. ; iyo wixii dunida daciifa ka hor, Ilaah wuxuu doortay inuu ka xishoodo waxa itaalka daran (1 Korintos 1,19:27 iyo XNUMX LUT).
Bawlos wuxuu u sheegayaa isla dadkaas in Masiixu sarakiciyay uu isaga u muuqday "ugu dambayntii sidii dhalasho aan caadi ahayn" ka dib markii uu u muuqday Butros, 500 walaalo ah munaasabad kale, ka dibna Yacquub iyo rasuulladii oo dhan. Talo kale? Kuwa daciifka ah iyo kuwa nacasnimada ah miyey ceeboobi doonaan kuwa caqliga leh iyo kuwa xoogga badan?
Ilaah had iyo goor wuxuu si toos ah u fara geliyaa inta lagu gudajiray taariikhda reer binu Israa'iil oo dib ayuu uga noqday amarka la filayay. Ceesaw wuxuu ahaa curadkiisii, Yacquubna wuxuu dhaxlay curadnimadiisii. Isxaaq wuxuu ahaa curadkii Ibraahim, laakiinse Isxaaq curadnimadiisii ​​waa la siiyay. Markii Yacquub u duceeyey labadiisii ​​wiil oo ahaa, ayuu gacmihiisii ​​saaray kii yaraa oo reer Efrayim ahaa, oo wuxuu saaray Manaseh. Boqorkii ugu horreeyey ee reer binu Israa'iil ee Saa'uul wuu addeeci waayey Ilaah markii uu dadka xukumay. Ilaah wuxuu Daa'uud ka doortay mid ka mid ah wiilashii Yesay. Daa'uud wuxuu ilaalinayay idihii berrinka joogay, oo isagana waxaa loogu yeedhay inuu ka qayb galo subkadiisa. Markii uu ahaa kii ugu yaraa, looma tixgelin inuu u qalmo booskan. Halkan, sidoo kale, “nin qalbigiisu qalbigiisu Ilaah ahaa” ayaa laga horraysiiyay dhammaan walaalaha kale ee muhiimka ah.
Ciise wax badan buu ka yidhi macallimiinta sharciga iyo Farrisiinta. Ku dhawaad ​​dhammaan Cutubka 23 ee Injiilka Matayos ayaa ka hadlaya iyaga. Waxay jeclaayeen kuraasta ugu fiican ee sunagogga, waxay ku faraxsanaayeen in lagu soo dhoweeyo suuqyada, ragga ayaa ugu yeeray rabbi. Waxay wax walba u qabteen sidii ay u heli lahaayeen dadweynaha. Isbeddel muhiim ah ayaa dhowaan soo baxay. "Yeruusaalemay, Yeruusaalem ... Immisa jeer baan jeclaan jiray inaan carruurtaada u soo ururiyo, sida eeydu carruurteeda baalasheeda hoostooda ugu ururiso, mana aadan rabin! Gurigaaguna wuxuu kaa tegi doonaa cidla, (Mt 23,37-38 LUT).
Waa maxay macnaha: "Wuxuu afgembiyey kuwa xoogga badan oo kuwa hooseeya?" Wixii nimco iyo hadiyado ah ee aan ka helnay xagga Ilaah, ma jirto sabab aan isku faanno! Kibirku wuxuu calaamad u ahaa bilawga dhicitaanka shaydaanka wuxuuna noo yahay aadamiga. Sida ugu dhakhsaha badan ee uu gacanta ugu qabto, waxay beddeshaa aragtideena iyo aragtideena oo dhan.
Farrisiintii isaga dhegeysatay waxay ku ashtakeeyeen Ciise inuu jinniyo ku saaray Be'elsebul oo ah amiirka jinniyada. Ciise wuxuu soo saaray bayaan xiiso badan: “oo ku alla kii ku caaya Wiilka Aadanaha, waa la cafiyi doonaa, laakiin ku alla kii ku hadla wax Ruuxa Quduuska ah ka gees ah looma cafiyi doono adduun iyo Aakhiraba ”(Mt 12,32 LUT).
Sida had iyo jeerba, waxaa jiray waxyaabo ka reeban. Nikodemos wuxuu u yimid Ciise habeenkii, wuxuu damcay inuu waxbadan fahmo, laakiin wuxuu ka baqay Sanhedrin, golaha sare (Yoon 3,1: 5,34). Kadib wuxuu raacay Yuusuf kii reer Arimithea markii la dhigay meydkiisii ​​Ciise. Gamalii'eel wuxuu Farrisiintii uga digay inay ka hor tagaan wacdinta rasuullada (Falimaha XNUMX: XNUMX).
Muujintii 20,11:XNUMX waxaan ka akhrinaa xukun ka hor carshiga Caddaan Weyn, iyadoo Ciise uu xukumayo "kuwa dhiman". Ma laga yaabaa inay macallimiintaan caan ah ee reer binu Israa'iil, oo ah 'ugu horreeya' bulshadooda waqtigaas, ugu dambeyntii Ciise, oo iskutallaabta lagu qodbay, ay arki karaan qofka uu runtii yahay Tani waa "calaamad" aad uga wanaagsan!
Isla mar ahaantaana, iyaga laftooda waa laga saaray boqortooyada. Waxay arkayaan dadka ka yimid xagga bari iyo xagga galbeed oo ay hoos u fiirinayeen. Dadka aan waligood ka helin faa iidada ay ku ogaadaan Qorniinka ayaa hadda fadhiya fadhiga weyn ee Boqortooyada Ilaah (Lukos 13,29:XNUMX). Maxay noqon kartaa sharaf dhac badan?
Yeedheel Ezekiel 37. Waxa ku yaal "Meelaha Lafaha Dhimashada" ee caanka ah. Eebbe wuxuu nebigu siiyay aragti cabsi leh. Lafaha qalalan waxay ku urursadaan "dhawaaq gariqsan" waxayna noqdaan dad. Ilaah wuxuu Nebiga u sheegay in lafahanu ay yihiin reer binu Israa'iil oo dhan (oo ay ku jiraan Farrisiintii).
Waxay dhaheen: "Yahow binu-aadamka, lafahaasi waa reer binu Israa'iil oo dhan. Bal eeg, hadda waxay leeyihiin, Lafahayagii way engegeen, oo rajadeennuna waa lumisay, oo innaguna inalama dhammaan. ”(Yexesqeel 37,11:37,12 LUT). Laakiin Ilaah wuxuu yidhi: "Bal eeg, anigu dadkayga aqaan, anigu waan furi doonaa qabuurihiin, oo qabuurihiinnaan idinka soo bixin doonaa, waxaanan idin keeni doonaa dalka reer binu Israa'iil. Dadkaygow, markaan qabuurihiinna wada furo, oo aan qabuurihiinna idinka soo bixiyo, waxaad ogaan doontaan inaan anigu Rabbiga ahay. Oo waxaan nafsadaydaada ku gelin doonaa inaad mar kale sii noolaan doontaa, oo inaan waddankaaga fadhiisan doono, oo waxaad ogaan doontaa inaan anigu Rabbiga ahay (Yexesqeel 14: XNUMX-XNUMX LUT).